स्टेप बाय स्टेप सोलर कोर्स - इन्टरनेटमा नम्बर १ बेच्ने कोर्स
नवीकरणीय उर्जा पाठ्यक्रमहरू, सौर्य पाठ्यक्रमहरू, हावा कोर्सहरू, नवीकरणीय ऊर्जा
टी स्टेप बाय स्टेप सोलर अनलाइन कोर्स इन्टरनेटमा पहिलो बिक्रि कोर्स हो जुन १२० मिलियन भन्दा बढी भुक्तानी भएका विद्यार्थीहरू हुन्। सबै पाठ्यक्रम प्रशिक्षण पाठहरू सरल, सीधा अगाडि र व्यावहारिक राखिन्छन्। पाठ्यक्रमले वास्तविक सौर प्रतिष्ठानको बहु वास्तविक भिडियो भिडियोहरू प्रदान गर्दछ जुन स्पष्ट र शुरुआत-अनुकूल छ कि कुनै चरणहरू छोड्दैन भनेर निश्चित गर्न। हाम्रो level लेवल कोर्सको स्तर १ को लक्ष्य भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो कि विद्यार्थीहरू आत्मविश्वासका साथ आवासीय सम्पत्तिमा पूरा सौर प्यानल प्रणाली स्थापना गर्न सक्षम छन्। यस कोर्स गर्न पहिले सौर्य अनुभवको आवश्यक पर्दैन, कुनै प्राविधिक ज्ञानको आवश्यक पर्दैन तर विद्यार्थीहरूले सोलर प्यानल प्रणाली स्थापना गर्न सरल र स्पष्ट गाइड अनुसरण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। चरण By चरण सौर कोर्स हाम्रो पूर्ण विस्तृत, हस्ताक्षर कोर्स हो। त्यो शुरुआतमा दिमागमा राखेर सिर्जना गरिएको हो। जान्नुहोस् कसरी आत्मविश्वासपूर्वक सम्पूर्ण सौर्य प्रणाली स्थापना गर्न सुरू देखि समाप्त सम्म। यस कोर्सको अन्य सुविधाहरूमा अतिरिक्त.al भिडियोहरू, क्विजहरू, pdf समर्थन सामग्रीहरू, ppt स्लाइडहरू, र सौर परामर्श चित्रणहरू किम्रोए र शेरिका बेलीले आफैंले अभिनय गरेका छन्। विद्यार्थीहरूलाई १ बर्ष कोर्सको सबै सामग्रीहरूमा निःशुल्क पहुँच प्रदान गरिन्छ र कुनै बर्ष भित्र कुनै नयाँ अपडेटहरू छन्
SKU: KB-OC-005 विभाग: नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय उर्जा पाठ्यक्रमहरू, सौर्य पाठ्यक्रमहरू, हावा कोर्सहरू ट्याग: सोलार स्टेप स्टेप
किम्रोय बेली ग्रुपले साझेदारीमा सोलार स्टेप बाय स्टेप सोलर विकसित गरेको हो ट्रट बेली विश्वविद्यालय व्यक्तिहरूलाई कसरी आत्मविश्वासपूर्वक विश्वसनीय सौर्य ऊर्जा प्रणाली स्थापना गर्ने भनेर सिकाउन। हाम्रो अनलाइन पाठ्यक्रम उद्योगको प्रमाणीकरण मानक हो र ११126 बिभिन्न देशहरूबाट १२118 मिलियन सौर स्थापनाकर्ता प्रमाणित गरिएको छ। स्टेप बाय स्टेप सौर ट्रोट बेली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त छ, जसले सौर स्थापनाकर्ताहरूलाई विश्व-स्तरीय अनलाइन शिक्षा अनुभव प्रदान गर्दछ। ट्रोट बेली विश्वविद्यालयले सबै पाठ्यक्रम सामग्री अनुवाद गरेको छ र अब पाठ्यक्रम 75 XNUMX भन्दा बढी विभिन्न भाषाहरूमा उपलब्ध गराइएको छ!
जान्नुहोस् कि कसरी आत्मविश्वासका साथ एक पूर्ण सौर प्यानल प्रणाली स्थापना गर्न कदम द्वारा कदम सौर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संग। तपाईंको पहिलो स्थापना गर्नाले डरावना हुन सक्छ, हामीलाई तपाईंको दृश्य-आधारित प्रशिक्षणको साथ प्रोसेस डिमसाइटि help मद्दत गर्न मद्दत गर्नुहोस्। हाम्रो ग्राहक समर्थन टोली यहाँ छ तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो एक एजेन्टसँग कुरा गर्न!
यसको मतलब तपाईको पहिलो ग्राहकको साथ शुरुआती परामर्श, तपाईको पहिलो सौर अडिट, तपाईको सौर प्रस्ताव, तपाईको पहिलो सौर प्यानल, ब्याट्री, चार्ज कन्ट्रोलर, इन्भर्टर स्थापना र तपाईको ग्राहकको घरको शक्ति उत्पादन गर्नु हो। यो कोर्सले पेशेवरहरूले प्रदर्शन गरेको धेरै वास्तविक जीवनको छत-शीर्ष स्थापनाहरूको भिडियो फुटेज प्रयोग गर्दछ। तपाइँको काम ठीकसँग सम्पन्न गर्न, तपाइँको भुक्तानी स collect्कलन गर्न, र सौर प्रणाली स्थापनाबाट गम्भीर नाफा कमाउनको लागि हामी तपाइँको हात समात्नेछौं।
स्टेप बाय स्टेप सोलर कोर्सले अफ-ग्रिड र ग्रिड-टाई सौर स्थापनाहरूको भिन्नता गर्दछ। हामी सुझाव दिन्छौं कि विद्यार्थीहरूले हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् एक प्रो सोध्नुहोस् कुनै पछ्याउने प्रश्नहरूको लागि सेवा। प्रश्नहरू हाम्रो अनलाइन च्याट प्लेटफर्म मार्फत सबमिट गर्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस् हाम्रो एक बिक्री प्रतिनिधिलाई अब कुरा गर्न.
कुनै उत्पाद प्रकार जुन तपाईं चाहानुहुन्छ - सरल, विन्यास
डाउनलोड गर्न योग्य / डिजिटल उत्पादहरू, आभासी उत्पादनहरू
ब्याकर्डर्ड आईटमहरूको साथ सूची व्यवस्थापन
सोलार कोर्स स्टेप बाय स्टेपको सिंहावलोकन
स्टेप बाय स्टेप सोलर कोर्स व्यक्ति, सौर पेशेवरहरू, छतहरू, ठेकेदारहरू, दिग्गजहरू, र जो कोही पनि क्यारियर परिवर्तन खोज्नको लागि आदर्श हो। यदि तपाइँ प्रशिक्षणमा रुचि राख्नुहुन्छ जसले तपाइँलाई सौर उद्योगमा प्रवेश गर्न तयार गर्दछ, यो तपाइँको लागि पाठ्यक्रम हो।
स्टेप बाय स्टेप सोलर कोर्स पनि कलेजहरूको लागि प्रयोग गर्नको लागि एक उत्कृष्ट समर्थन कोर्स सामग्री हो। यसैले चरण सौर कोर्स द्वारा चरण भारी सिद्धान्तमा आधारित कलेज कोर्सहरू सन्तुलनमा राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो पाठ्यक्रम एक अधिक ह्यान्ड्स-अन, फिल्डमा, वास्तविक जीवन परिदृश्यहरू शिक्षण शैली है जुन कुनै पनि शुरुवातकर्ता वा सौर व्यावसायिकले सराहना गर्छन्।
एक सौर स्थापना व्यवसाय को आधारभूत
यो कोर्स सौर स्थापना व्यवसाय चलाउन को लागी व्यापार को लागी delves। यसैले तपाईं किमरोय र शेरिकाको भिडियोहरूमा पहुँच गर्नुहुनेछ जस्तो मुद्दाहरूको छलफल गर्दै:
स्थापना दिन तयारी योजना,
तपाइँको सौर स्थापना व्यवसाय को लागी मुनाफा मार्जिन।
आज सिक्न सुरु गर्नुहोस्। आउनुहोस्, नहिचकिचाउनुहोस्। एक बुद्धिमान मानिस एक पटक भने, "यदि तपाइँ उपयुक्त मौसमको लागि रोप्न सुरूको लागि पर्खिरहनु भएको छ भने, तपाइँले कहिल्यै कटनी गर्नुहुन्न।" यस्तै प्रकारले, उत्तम पाठ्यक्रम, उत्तम समय, उत्तम कामका सर्तहरू, वा जीवन पign्क्तिबद्धतालाई आज सुरू गर्न पर्खनुहोस्। तपाईले भर्खरका प्रमुख अवसरहरू हराउन सक्नुहुन्छ जुन नवीकरणीय उर्जा उद्योग भित्र आउँदैछन्।
लागि 1 समीक्षा सोलार स्टेप स्टेप
किमरोय बेली - जुलाई 7, 2018
अति उत्तम पाठ्यक्रम
कस्टम ट्याब सामग्री